Police Ka Iyo Military Ga Maxay Ku Kala Duwanyihiin.
Wednesday November 06, 2019 - 15:12:44 in Articles by Hadhwanaag News
Police ka iyo Military waa laba ciidan oo jiritaanka wadan ilaaliya
marka taa laga yimaado mid waxa loo tababaraa cadawga Xuduudaha wadanka ku soo xadgudba ee soo gala ,Siyaasadda Dawladda ayuu xoog ku ilaaliyaa, waxaa la baraa inuu dilo cidda ka soo horjeedda oo aanuu u nixin. Police ku aad buu uga duwanyey Military ga isna sharcigii wadanka ayuu ilaalinayaa waxaana laga horgeeyaa shacabka ,waxaa lagu tababaraa inaanuu toogan shacabka soo rasaas nool la dhici karin ee uu u waajaho hab saaxiibnimo ula macaamilo ilaaliyo NAFTA iyo adduunkaba laakiin SOMALILAND in badan waxay nu u soo joognay iyadoo police ku tooganayo dad aan rasaas ku soo ridayn oo mudaharaadaya ama kuwiiyoo doorasho ku jira oo xabbad lala dhaco iyadoo si qaldan loo maray ciidanka. Police ka adduunka waxaa lagu training gareeyaa dareenka binu aadminimada Military ga cidda loo diro inuu dilaa kasoo la soo baraa. Markaa Military ga SOMALILAND waxaa askarta iyo Madaxda ba ka buuxa dad military ah oo inay ciddii loo diro toogtaan. Imika SOMALILAND laba askari ayaa horjooge u noqday khasaare weyn baa ka soo socda police ka Miltary gu hoggaaminayo, micnuhuna wuxuu u dhacayaa waa la baabiinayaa Police ka SOMALILAND oo waa la Military yeynayaa shacabkaanay u taallaa inay arintaa fahman waayo Baarlamaano xaalkooda iyo sharci dejini wey iska tagtay ee dadku waxay uun sii ursanayaan Maqaarsaarka Baarlamaanada lags dhigay.
Police ka Military waa kala dhaqan waa kala tababar waa kala shaqo waa kala ( location) waa kala maskax waa kala ujeedooyin.
Waxaa keliya uu Muse Biixi Military ga Police uga dhigayaa waa in shacabku noqdo ka la tooganayey ee Military ga is waajahayeen.
Military gu siyaasadda Dawladda iyo Xuduudaha ayey ilaaliyaan ciddii joogso hadday askari ku yidhaadaan oo aad joogsan diidid waa inay ku toogtaan sidaasay lagu soo tababaraa laakiin police ku wuxuu toos ula shaqeeyaa Dawladaha house oo aanay Military shaqo isku lahayn iyo Shacabka oo ilaalibtiisa police ka lagu tababaraa. Haddii Madaxda Police Military laga dhigo mushkilad weyn baa wadanka kusoo waajahan iyo isfahan la'aan iyo Amarro military.
SOMALILAND RAQDA WAXAA KA DHIGAY XUKUUMADDII SILAANYO KU XANUUNSADAY, RAQDIIBAY LABADA ASKARI KUSOO HADHEEN ,WAA LABA TUKE ,TALAAOOYINKOODU WAY MUUQDAAN .
WAXAANA AYAAN DHAW IMANAYSA LABADII TUKOW BAL MAXAA TARTEEN DADKII TOOGATEE BAL MAXAA TARTEEN.